सल्यानमा पहिलो पटक च्याउको बीउ उत्पादन शुरु « Salyan Today
सल्यानमा पहिलो पटक च्याउको बीउ उत्पादन शुरु
सल्यानमा नै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिबाट च्याउको बीउ उत्पादन शुरु भएको छ । जिल्लाको शारदा नगरपालिका १३ सांगारमुलमा रहेको नवयुग प्रेरणा एग्रिकल्चर प्रालिले च्याउको बीउ उत्पादन शुरु गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा अत्याधुनिक प्रबिधि मार्फत च्याउको बीउ उत्पादन फर्म सञ्चालनमा आएको हो ।
किसानहरुको माग तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै रु. २७ लाख बढीको लगानीमा बीउ उत्पादन गर्न थालिएको सञ्चालक लाल बहादुर बस्यालले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार अन्र्तगत कृषि मन्त्रालयको गत आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को रु.१० लाख अनुदान र आफ्नो करिब १८ लाख रुपैैँया लगानी बाट च्याउको बीउ उत्पादन गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सल्यान सहित आसपासका जिल्लाका च्याउ उत्पादक किसानहरुलाई सहज, सरल र सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीयय च्याउको वीउ पु¥याउने उद्देश्यले च्याउको बीउ उत्पादन थालिएको उहाँले बताउनुभयो । २०७१ साल देखी च्याउ खेती गर्दै आएका उहाँले गत बर्षदेखी च्याउको बीउ नै उत्पादन गर्न थाल्नुभएको हो ।
‘अहिले कन्या च्याउको बीउ उत्पादन गर्दै आएको छु, किसानको माग अनुसार अन्य च्याउको बीउ पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो—‘अहिले किसानको माग अनुसार मात्रै बीउ उत्पादन गरिरहेको छु ।’ उहाँले एक महिनामा २५० ग्रामका २५ हजार च्याउको बीउका प्याकेटहरु उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
‘दैनिक रुपमा ८ सय प्याकेट बीउ उत्पादन गर्ने क्षमता छ तर माग बीना नै उत्पादन भयो भने बिक्री नभएर खेर जान्छ, त्यसैले किसानको माग अनुसार मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौँ’— उहाँले भन्नुभयो । उहाँले च्याउको बीउलाई स्टोर गर्न नमिल्ने भएकाले माग अनुसार नै उत्पादन गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
यहाँको बजारमा अहिले २ सय रुपैँया केजीमा च्याउ बिक्री हुन्छ । उत्पादित २५० ग्राम बीउको फुटकर मूल्य प्रति पोका रु. ५० र थोक मूल्य रु.४० निर्धारण गरिएको सञ्चालक बस्यालले बताए । सानो क्षेत्र र जिल्लामा च्याउ खेती गर्ने किसानहरुको संख्या पनि कम भएकाले सोचे अनुसारको बजार पाउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
अहिले जिल्ला भित्रका साथै बाहिरी केही जिल्लाबाट अडर आउन शुरु भएको उहाले जानकारी दिनुभयो । उहाले फर्ममा २ जना यूवालाई रोजगारी समेत दिनुभएको छ । जिल्लामा च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने कुनै फर्म नहुँदा च्याउ उत्पादक किसानहरु महँगो मूल्यमा काठमाडौँ तथा पोखराबाट अगुणस्तरिय बीउ किनेर व्यवसायिक च्याउ खेती गर्न बाध्य भएका थिए ।